Harmee Oromoo Boochisuun Itti Fufe. « QEERROO
Harmee Oromoo Boochisuun Itti Fufe.
July 22, 2011 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
(Qeerroo, Amboo, 22 Adoolessa 2011) Mootummaan murna bicuu, Wayyaaneen Qeerroo Oromoo adamsuu fi hidhuu itti fufuun, barattoota Oromoo magaala Amboo keessaa badiin tokkoo malee mana hidhaatti darbaa akka jiru gabaasame.
Gabaasaan Qeerroo Amboo irraa akka hubachiisetti, sirni Wayyaanee akkuma baroottan daraban Harmee Oromoo boochisaa turetti, ammas Adoolessa 20,2011 barattooti Oromoo sadarkaa lammaffaa barataa turan badiin tokkoon malee magalaa Amboo keessaa qabamanii bakka jiran hin beekamu.
Akka gabaasa Qeerroo magaalaa Ambootti barattooti kun mana barnoota isaanii keessatti qaroo fi dammaqoo tahanii fi dhimmota miidhaa saba isaanii irra gahuu fi mirga dhala namaaf waan dubbataniif qabamani malee badii tokko illee hin qaban. Maqaa barattoota kanaas
1. Barattaa Ifaa Gaarii
2. Barataa Eebbisaa Tulluu
3. Barataa Caala Tolaa
4. Barattaa Lata Kinfuu warreen jedhaman tahuu gabaasi qeerroo naannoo sanii ni addeessa.
Yeroo har’aa duula barattoota Oromoo fi qoteebulaa Oromoo hidhuutti kan bobba’e mootummaan Wayyaanee, hidhaa fi ajjechaan akkasumas ummata deegsanii hiyyoomsuun daran qabsoo Oromoo jabeessa malee furmaata gaaffii mirga ummata Oromoo akka hin taane dargaggoonni Oromoo bakka hunda irraa beeksisaa jiru.
Haala kana irratti Qeerroon Bilisummaa dhaamsa gabaabaa dabarseen hidhaa fi ajjeechaan kamuu Qeerroo jabeessa malee kaayyoo isaanii dubbatti hin deebisu jedhee jira.
“Oromoon jaarraa 16ffaa keessa biyya isaa alagaa irraa deebifatee, leelloo walabummaa goonfate har’a saba bicunn hiraarfamaa jiraachuun qaanessaa dha,” kan jedhe Qeerroon, kaka’umsa seenaa fokkotaa kana jijjiiruuf karaa Qeerroo haaromfame waanti duubatti deebisu akka hin jirre hubachiiseera.
“Qeerroon dhaloota haaraa egeree biyyaa ti. Qeerroon biyyaa fi biyyee garbummaan dhaalamte bara baraan jiraachisuu hin fedhan. Qeerroon irra deebi’ee kan dhaamu, hidhaan nu hin balleessu; kaka’umsa keenyas hin laamshessu. Inumaayyuu, kaayyoon keenya hagam jabaa fi haqa irratti akka hundaa’e mirkaneessa.” jedhee jira.
« QABSOO-DHA MAQAAN ISAA*
Manni Murtii Federaala TPLF Mormiin Saboontota Oromoon Jeeqame »
Duraan dursee ilmaan Oromoo rakkina (waanjoo)garbummaa jalaa baasuf waan hoojjattan kanaaf guddiseen isin galateeffadha. Akkanumatti akka itti fuftan isiniifan hawwa. Waanan danda’een isin bukkeen dhaabadha.Akka uumman Oromoo bilsoomus abdii guddaan qaba.
Obbolootaa, yeroo hundumaa waanni naa galuu didee na yaachisu tokko jira. Ayyoota Oromoo, namma heddu gaafadhee deebin isaan naa kennan waan na amansiisuu dideefuu, warra dhaloota egeree boruu, gaaffin yaade, isa irriba nadhoowwu kana gaafachuun barbaada.
1. Ilmaan Oromoo (uummanni lakkoofsi isaa hammana baay’atu) maalif tokko tawuu dadhabee uummata lakkoosa bicuu kanaan akkuma kanaan duraa bitama?
2. Uummanni Oromoo maalif wal gurgura?(maalif basaastuu diinaa tayee wal rakkisa?)
3. Uummanni Oromoo maalif ‘aaloo walii hin baafne?
4. Tokko ta’anii, wajjin dhaabatanii bilisummaa ofii falmachuun otoo namarra jiruu maalif ilmaan Oromoo addadda qoodamtee dhaaba addaddaa dhaabdee uummata burjaajessiti?
5. Hennaa qabeenya biyyaa (midhaan, albuda, horii, lafa, —) jalaa saamanii beelessani maalif callisan wal ilaalu?
6. “Sabbonummaan jiraatu malee bilisummaan tassatti hin argamu.” Sabbontoota baay’suuf seenaa sabbontootaa barsiisuu barbaachisa. Fakkeenyaf yoo fudhanne, biyyoonni heddu Hernest che Giyaveraa, goota uummata Kuubaa bilisoomse, bilisummaa (liberation)ilmoo namaatif otoo loluu ajjeeffame uummanni addunyaa kanaa, keessayyuu dargaggoonni suuraa isaa kittaa isaanii irratti faa odhatanii uffatu. Uummanni Oromoos gootota heddu qaba. Maalif seenan isaanii (seenaa Hagarii Tulluu faa) bakka hundatti hin tamsaasne?
Tokkummaan ilmaan Oromoo bu’uura bilisummaa Oromiyaati!
Qeerroo Bilisummaa Horroo Guduruu Magaalaa Amuruu Guyyaa Har’aa Fincila Xumura Gabrummaatti Jiru.
Onko 16,2017 Wallagga Ukkee Qarasaa, Diddaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Qeerroo Bilisummaa Horroo Guduruu Magaalaa Amuruu Guyyaa Har'aa Fincila Xumura Gabrummaatti Jiru.
"Ka'i Ka'i Qeerroo" Wallee Haaraa Artist Dawitee Mokonnon, 2017